iru eru - Hangzhou Fujie N'èzí Products Inc.,
Home » iru eru
Anyị ga-aza na 24 awa!
Fujie ikike na mbụ purchaser na Fujie na ngwaahịa ndị free si ntụpọ na ihe ma ọ bụ rụọ ya maka oge nke otu afọ site na ụbọchị nke ịzụta. Fujie bụ bụghị maka abnkịtị eyi na dọkatụrụ adọka, maka ngwaahịa na-eji commercially ma ọ bụ ọdịda mere site mberede,kparia, alteration,mgbanwe, n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị na-elekọta.
E nweghị ndị ọzọ awara awara warranties n'ofè okwu nta a na-akwụkwọ ikike. Na dịghị omume ga anj echiche warranties, tinyere merchantability na mma maka otu nzube, ịgbatị n'ofè oge nke awara awara akwụkwọ ikike dị n'ime ebe a. Na dịghị omume ga Fujie -atụba maka enwe ma ọ bụ ndị dị damages.
Ụfọdụ mba na-adịghị ekwe ka na-agaghị emeli na-esi ruo ogologo oge kwuru pụtara akwụkwọ ikike dịruru ma ọ bụ ịchụso ihe ịgba- ation nke a na-enwe ma ọ bụ ndị dị na-emebi, otú n'elu-agaghị emeli ma ọ bụ exclusions ghara itinye ka ị.Nke a akwụkwọ ikike na-enye gị kpọmkwem ikike na ị nwere ike na ndị ọzọ ikike nke ịdị iche iche site ná mba ka obodo.